Lomano – Analamanga : hijanona, tsy hirotsa-kofidina filoha Rarivo Hafaliana | NewsMada
Lomano – Analamanga : hijanona, tsy hirotsa-kofidina filoha Rarivo Hafaliana
Tsy anisan’ireo mpifaninana hiady ho filohan’ny ligin’Analamanga, taranja lomano, ny filohan’ny ligy am-perinasa, Rarivo Hafaliana. Hatramin’izao kosa, tsy mbola nisy nanatitra ny antontan-taratasy manambara ny firotsahan-kofidina eny anivon’ny ligy.
Mazava. Nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga am-perinasa, eo amin’ny taranja lomano, Rarivo Hafaliana, fa hijanona tsy hitantana ary tsy handrotsaka ny antontan-taratasy manambara ny firotsahan-kofidina ho filohan’ny ligy ny tenany.
Raha ny voalaza hatrany, mifanindry amin’ny asa sahaniny andavanandro ny andraikitra iantsorohany eo amin’ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja lomano. Manaraka izany, mety tsy hitoetra eto an-toerana mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ka izay indrindra no anisany nanosika azy tsy hirotsa-kofidina ho filohan’ny ligy hatreto.
Ankoatra izay, nambaran-dRarivo Hafaliana hatrany fa araka ny daty voatondro hampiantsoana ny fivoriambe sady fifidianana (AGE), hotanterahin’izy ireo ny asabotsy 6 aogositra izao izany. Mbola ity filohan’ny ligy am-perinasa ity no mitarika sy mampiantso io fivoriambe sady fifidianana io.
Etsy andaniny, ny 31 jolay izao no voalaza fa fara fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho an’ireo mpifaninana amin’izany. Hatramin’izao anefa, tsy mbola nisy na olona iray aza nanatanteraka izany teny anivon’ny ligin’Analamanga.